Nuxurka Warsaxaafadeed SOLJA Ka-soo-saartay Doorashadii Madaxtooyada Ee Bishan Qabsoontay | Hangool News
Nuxurka Warsaxaafadeed SOLJA Ka-soo-saartay Doorashadii Madaxtooyada Ee Bishan Qabsoontay
November 24, 2017 - Written by Hangool
Hargeysa (Hangoolnews.com) Ururka suxufiyiinta Somaliland ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan SOLJA ayaa ka hadlay doorashadii madaxtooyada ee 13-ka bishan aynu ku jirno ka qabsoontay Somaliland. Sida lagu sheegay warsaxaafadeed uu ku saxeexan yahay agaasimaha ururka Solja oo u dhignaa sidan.
“Doorka Ururka Suxufiyiinta Soomaliland ee SOLJA iyo warbaahintu ka qaadatay doorashada madaxtooyada Somaliland ee dhacday 13 Noofembar 2017 iyo Hambalyo ku socota Madaxweynaha iyo Madaxweyne xigeenka cusub ee Jamhuuriyadda Soomaliland.
Hargeisa: 23/11/2017: Ururka Suxufiyiinta Soomaliland ee SOLJA oo ka duulaya mabaadi’da guud iyo hawlgalkooda ku aadan horumarinta hay’adaha warbaahinta saxaafada ee dawliga ah, hay’adaha madaxa banaan iyo suxufiyiinta ka hawlgala dhammaan laamaha kala duwan ee warbaahintu waxa uu gacan ka geystay u diyaargarowga iyo u kuurgelida doorasho nabad qab, xor iyo xalaal ah oo daahfuran ka dhacdo Somaliland 13 November 2017.
Haddaba si uu Ururku u gaadho hadafkaas isaga oo kaashanaya hay’adaha dawliga ah, kuwa madaxa banaan iyo Hay’adaha caalamiga ah ee ay wada shaqaynta dhaw leeyihin waxa uu dejiyay nidaam iyo qorshe wax looga qabanayo horumarinta suxufiyiinta si ay ugu diyaargaroobaan tebinta iyo taabogelinta doorasho hufan.
Waxaana ka mid ah qorshayaashi hirgalay ee ururku ku talaabsaday kuwan soo socda:
U hawlgelid in la helo Xeerkii Anshaxa Saxaafadda doorashooyinka Nofembar 2017 isaga oo wadashaqayn buuxda la yeeshay hawlwadeenada iyo hayadaha ka shaqeeya arrimaha saxaafada Soomaliland sida Wasaaradda Warfaafinta iyo wacyigelinta, Komishanka Doorashoyinka Qaranka, Ururka Suxufiyiinta ee Wija iyo Suxufiyiinta ka hawlgala dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka. Xeerka Anshaxa Saxaafadda kadib wadatashiyo muddo dheer qaatay lagu ansaxiyay kulan loo dhanyahay 16/10/2017.
Qalabaynta Xafiiska dabagalka Saxaafadda iyo Hay’adaha warbaahinta(Media Monitoring Center): Ururka oo ka duulaya in la helo Saxaafad dhexdhexaad u ah xisbiyada ku loolamaya jagada madaxtinimadda iyo in loo sinaado warbaahinta dawliga ah sida: TVga Qarabka SLNTV, Idaacadda Qaranka, iyo wargeyska Dawan waxa la qalabeeyay xafiiska dabagalka warbaahinta oo si joogta ah usoo saarayay warbixin lana wadaagayay Guddida Xeerka Anshaxa Saxaafadda ee doorashooyinka ayna abuureen KDQku. Waxa sidoo kale xaruntu warbixin kasoo saaraysay dabaqida xeerka Anshaxa saxaafadda si waxlooga qabto loogana falceliyo. (Coffey-SOLJA)
Kobcinta aqoonta suxufiyiinta ee u aadan tebinta doorashooyinka: Waxa uu ururku toobaro kala duwan oo ku aadan tebinta doorashoyinka u fidiyay in ka badan 200 oo Suxufi oo ku dhaqan dhamaan 6 gobol ee Somaliland. Waxa sidoo kale suxufiyiinta la siiyay buug-yare ku hagaya hanaanka doorashoyinka loo tebiyo iyo macluumaad la xidhiidha kobcinta xirfadooda(IMS-SOLJA).
Guntii iyo Gabogebadii:
Dhammaan Hogaanka sare ee SOLJA iyo Shaqaaluhuba waxay hambalyo guud u dirayaan:
shacbiweynaha ku dhaqan Jamhuuriyada Somalilando iyaga oo ku bogaadinayna doorashadii ka dhacday Soomaliland 13 Noofembar 2017. Taas oo indhaha caalamka soo jiidatay kadib markii Warbixinihii hordhaca ahaa ee Goobjoogayaasha caalamiga iyo kuwa maxaliga ahiba ku sifeeyeen doorasho nabad ku dhacday, xor ah oo daahfuran isla markaana suurto gelin karta ictiraaf.
Dhammaan suxufiyiinta iyo hayadaha saxaafadeed eeka hawlgala Soomaliland oo muujiyay kartidooda iyo hufnaantooda shaqo iyaga oo mihnadooda saxaafaddeed ugu adeegay qaranka una hogaansamay shuruucda saxaafada khaas ahaan Xeerka Anshaxa saxaafadda ee Doorashoyinka. Waxa ay sidoo kale suxufiyiinku ku amaanan yihiin doorkii weynaa ee ay shicibka ugu tebinayeen dhammaan maraaxishii doorashada sida: wacyigelinta doorashada iyo kaadhqaybinta, Ololaha, doodii murashaxiinta iyo tebinta wararka iyo faalooyinka la tacaluqa doorashooyinka.
Hayadaha dawliga ah sida Wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta, Komishankta doorashooyinka Qaranka, ciidamada qaranka iyo hayadaha maxaliga ah.
Hayadaha caalamiga ah ee wadashaqaynta leenahay oo suurto geliyay inaan hirgelino mashaariic horumarineed sida: Coffey International, IMS, FREE PRESS, NED, UNSOM,VIKES,etc.
hambalyo gaar ah:
Xisbiyada Qaranka oo muujiyay bisayl siyaasadeed iyo in danta qaranka ka horaysiiyaan damacooda siyaasadeed iyada oo jirta duruufo iyo xaalado adag oo lagaga soo dabaashay wada tashi iyo isku tanaasul:
Musharixiinta Xisbiga Ucid: Eng Faysal Cali Waraabe iyo Prof: Abyan
Musharixiinta Xisbiga Waddani: Mudane Cabdiraxmaan Maxamed C/laagi cirro iyo ku xigeenkiisa Prof: Mohamed
Hambalyo iyo duco mug & miisaan leh waxaan u diraynaa:
Madaxweynaha la doortay: Mudane: Muuse Biixi Cabdi iyo
Ku xigeenkiisa: Abdirahman Abdilahi Saylici
In Alle xilka u fududeeyo oo la garab galo amaanadda ay u qaadeen shacbiweynaha Somaliland.
Agaasimaha Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA-Yaxye Maxamed Cabdi “Xanas”–